အိမ်ပြေး … Run Away | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိမ်ပြေး … Run Away
အိမ်ပြေး … Run Away
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 1, 2013 in Creative Writing | 35 comments
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကတော့ သူ့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လူတွေ၊ ဈေးသည်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ တောင်မှ မြောက်သို့သွားသူ၊ မြောက်မှ တောင်သို့လာသူ၊ အရှေ့မှအနောက်သို့ သွားသူ၊ အနောက်မှ အရှေ့သို့လာသူ အရှစ်ရှစ်မျက်နှာ ဖီလာ သွားသူလာသူတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ် ပလက်ဖောင်းဟာ မနေမနား အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အဲ့ဒီ ဥဒဟိုသွားလာနေကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်၊ အင်္ကျီအနက် လက်ပြတ်လေးနဲ့ ပုဆိုးကို ခပ်တိုတို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခပ်ပိန်ပိန် ခပ်ပါးပါး ကောင်လေးလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။
နေကလည်း နေသာတဲ့နေ့ပီပီ လွှတ်ပူနေတယ်။ တချို့က ထီးလေးတွေနဲ့။ အချို့ကတော့ ထီးဗလာနဲ့။ ကောင်လေးကတော့ နားထင်မှာ ချွေးတွေနဲ့ဆိုပေမယ့် ဖြေးဖြေးသက်သာ လျှောက်လှမ်းလျက် လမ်းဘေး ဆိုင်တွေကို ငေးကြည့်နေမိတော့တယ်။ သူ … နာရီဆိုင်တွေ အများစုရှိတဲ့ နာရီတန်းဘက်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကို ဝင်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာလည်း နာရီလေးတစ်လုံးနဲ့။
မှန်းစမ်း … ဘာလဲ ကြည့်ရအောင်။ သူ့လက်ထဲ ကိုင်ဆုပ်ထားတဲ့ နာရီက Q&Q အမျိုးအစား၊ ဖန်ရှင် စုံတဲ့ နာရီလေးပဲ။ ဆေးရောင်ကလည်း မမှိန်၊ အပွမ်းအပဲ့တွေလည်း မရှိတာကို ထောက်လိုက်ရင် ဒီနာရီဟာ အသုံးပြုတာ နည်းတယ်လို့ ယူဆလို့ ရသလို ဝယ်ထားတာလည်း မကြာသေးဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
သူက ခပ်ဝဝ လူကြီးတစ်ဦးကို သူ့နာရီလေး ထုတ်ပြတယ်။
“ကျနော် ဒီနာရီလေး ရောင်းချင်တယ်” …… တဲ့။
လူကြီးက နာရီကို သေချာကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
“ငါးထောင် ပေးမယ်” ….. တဲ့။
ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာ တစ်ချက် မှိုင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ လူကြီးကို ပြောလိုက်ပြန်တယ်။
“ကျနော် ဝယ်တုန်းက တစ်သောင်းကျော် ပေးရတယ်ဗျ။ ပတ်လည်း မပတ်ပါဘူး။ ငါးထောင်ထက် ပိုပေးလို့ မရဘူးလား ဦး”
လူကြီးက ခေါင်းခါတယ်။ သူ့မျက်နှာက ဒီထက် ပိုမပေးနိုင်ဘူး။ မကြိုက်ရင် မရောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံစံ။ ကောင်လေးက ပိုပြီး ရလိုရငြား ပြောကြည့်ပေမယ့် မရတော့လည်း ပေးတဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းလိုက်တယ်။ ကောင်လေး ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်အပြင် အခြားဆိုင် ၃၊ ၄ ဆိုင်လောက်ကိုလည်း ပြပြီး ရောင်းခဲ့ပြီးပြီ။ အချို့ဆိုင်တွေက မဝယ်ဘူး ဆိုလွှတ်တယ်။ အချို့ဆိုင်တွေက နှစ်ထောင်၊ သုံးထောင်ပဲ ပေးတယ်။ အခု ငါးထောင်ဆိုတော့ ဒီလောက်ဆို သူသွားမယ့် ခရီးအတွက် လုံလောက်ပါပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ့နာရီလေးဟာ ဈေးတည့်လို့ သွားပါတော့တယ်။
ဆက် … ရ … န် ….
ဒါဘဲလား ညှစ် ပါဗျ ခပ်များများ လေး
စောင့် ဖတ်နေမယ် ဗျို့
အော် … ကိုကိုမောင် ရယ် …
တောင်ကို တက်တဲ့လူဟာ ဖြည်းဖြည်း တက်ရဒဒဲ့ …
ခုလည်း ဒီလိုပေါ့နော် …
(ဆိုင် ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် .. ဆိုင်တယ်လို့ ဘောထားပေးဘာ)
ခုလို လာအားပေးတာ သန်းခရု ဗဲယီးမက်ခ်ျ ပါ …။
အိမ်ပြေးတွေများးးးးး သိပ် အထာကိုင်တာဗျဲ..။
သူများ ကို ပေါရဒယ်ရှိသေးးး ဟွန့် …
သူ့ဟာသူ ပီးဒလောက် တင်လိုက်ဒါ …
ခုလို လာဖတ်လို့ သန်းကျူးဘဲ … ဟွန့် ..
အစ တစ်ခုတော့ ထွက်လာပြီ….
ဒီစာကိုလဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ထားလို့ကတော့ နီ မသက်သာဘူးမှတ်
နင်က မိုက်လို့လား ….
ဖဘ က နင့်ပုံကို ရွာထဲမှာ ၁ လတိတိ ပြောင်းထားမလား …
လူကိုများ စွပ်စွပ်စွဲစွဲ …
ဟုတ်ဘူးးးး ဟုတ်ဘူးဆို ဟုတ်ဘူးးးး
ညက စိတ်ပေါက်တုန်း ရေးထားတာကို တင်လိုက်ဒါဗျဲ .. ဟွန့် ..
ရေးနေတာ ရှည်လမျောကြီး.. ပျက်သွားတယ်
ဟိုဟာ ကြက် ..
ဒီဟာ ဝက် …
ဂွပ် … (ပုလင်း ဆောင့်ချလိုက်သံ)
နင့်အတွက် ယောက်ကျားလိုက်တောင်းပေးဘာ့မယ် …
ဥဥဆာ ဂလည်း .. ဟီးးးး
ချက်တောင် ချက်တွားဒယ် .. ဟီးးး
ဟကောင်လေး …ဒါပဲလား…အင်ထရိုက ….
ဟကောင်လေး …… ဒဲ့ …
နင်က ဘယ်လောက်ကြီးနေလို့ဒုန်းးးးး (အသက်)
ဒါ .. အင်ထရို အပိုင်း ၁ ဘဲ ..
ဘာဖစ်ဂျင်လို့ဒုန်း .. မိုက်ရို့လား ….
အဲ့လို အိမ်ပြေးတဲ့ သူငယ်လေးတွေကို ဘပုက သူ့ဆီအပ်ပါတဲ့..
အိုက်ကောင်လေးကို တစ်သက်လုံး ကျွေးမှာလားငင်င်င်
ကျွေးမယ်ဆိုယင်ဒေါ့ စားဂျင်ဒယ်လို့ ပေါပေးဘာနော် … ခွိခွိ ..
အဲဒီလိုနဲ့ လမ်းဆက်လျှောက်လာတဲ့ ကောင်လေးဟာ …………
တာမွေ အရောက် (ဘယ်လိုရောက်ရောက်)
ရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်နေတဲ့ တာမွေလူမိုက် တွေ့မရှောင် နဲ့ အတွေ့…………..
“ဟဲ့၊ အံစာတုံးးးးး ခု ရှိသလောက် ငွေ အကုန် ပေးခဲ့စမ်းးးးး”
ဖဲ ဝိတ်ဇာ လေးလေးကြည် ဆီမှာ ဖဲရှုံးထားတဲ့ အကြွေးဆပ်ချင်လို့”
အဲဒီလိုနဲ့ အဲ့ကောင်လေး ရဲ့ ၅၀၀၀ လည်း ပါသွားရော။
နိ ဘာဆက်ရေးနိုင်ဦးမတုန်းးးး၊ ရှိတာကုန်ပြီ။
သူ လုပ်မှ အိမ်ပြန်ရမယ့် အပေါက် …
ဆိုပီး ထွက်ပြေးမယ် …
ဘာမွှ လာချင်းပြနဲ့ဒေါ့ .. ဒါဗျဲစ် …
အွန်…နာ့ အကြွေးလည်း ခုထိလာဆပ်သေးဘူး။ သူကြီး တိုင်မှ ပါလေ။
အမ်အိုင်စီတီကနေ ရွှေတောင်ကြားကို ကားငှားရင် ၁၅၀၀…
ရွှေတောင်ကြားကနေ လှည်းတန်းကို ကားငှားရင် ၁၅၀၀
လှည်းတန်းကတေ သင်္ဃန်းကျွန်းကို ကားငှားရင် ၂၀၀၀ မရဘူးကွယ့်…
ညီလေး ရှိတာလေးတွေထပ်ရောင်းလိုက်ဦး…. ဒါမှ မင်းအိမ်ပြန်ရောက်မှာကွယ့်
တားမှာ ရှိတာလေး ထပ်ရောင်းစရာဆိုလို့
အိန်းဂျီနဲ့ ပုဆိုးဘဲ ကျန်ဒေါ့ဒယ် ..
ကိုဂျီးဆီမှာ ကျော့ပုဆိုးလေး ခဏ အပေါင်ထားဂျင်ဘာဒယ် …
သင်္ဃန်းဂျွန်းကို ပျံပို့ပေးဘာနော် … ခွိခွိ
မဆက်တော့ နင်က ဘာဖစ်ဂျင်လို့ဒုန်း
ဒင်းတော့လား နာဂျင်ဘီထင်ဒယ် …
မဆက်တော့ နီ့ ပိုစ့် မဖတ်ရဘူးပေါ့ကွယ်
နီ့ ပိုစ့်မဖတ်ရတော့ တခြားပိုစ့်တွေ ဘက် အချိန် ပိုပေးနိုင်တာပေါ့ကွယ်
ဟတ်ကဲ့ဘာ တီအိ …
ကျော်လည်း အိမ်ပြေး ဖြစ်ခဲ့ဘာဒယ် …
ဒီဇာတ်ကိုဒေါ့ အဆုံးသတ်အောင် ပေးဘာ့မယ် ခီည ..
ခုလို လာအားပေးဒါ သန်းကျူးဘာ …
ခြောက်ညက်နှာ ညီးညက်ရည်ချူဖို့လုပ်နေဒလားဟေ။ ရေးမှာဖြင့်မြန်မြန်ထက်ထက်ရေး။ တကတဲ တို့စိတို့စိ နဲ့ ညီးကောင်မလေးနဲ့ကျမှ ၀တ်လည်လိမ့်မယ်။ ဟိုကတို့စိတို့စိလုပ်ပါဇီတော့
ဆုတောင်းဒွေဂ ကြမ်းလိုက်ဒါတော် …
ရေးနေဘာဒယ် တိုရီးသဲရာ …
စိတ်ရှေ သီးခံ လမ်းဂျောင်းမှန် မောင်းရန် မော်တော်ကား ဒဲ့ ခည …
အရပ်ကတို့ကို သတင်းပေးရင်ဖြင့် အဲဒီဇာတ်လမ်းကို ဒီနှုန်းနဲ့ရေးရင် ၁၀ ပိုင်းလောက် ဖတ်ရပါလိမ့်မယ် ။
ဟိ . . . ဖော်ကောင်လုပ်ခဲ့ပီ
ဘာဖစ်ဖစ် သည်းလေး လုပ်သမျှ အကောင်းချည်းဘဲ …
ရမ်းရမ်းချစ်တယ် သည်းလေးရယ် ….
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်ပြေးလုပ်ဖူးတယ်။ အမေ့အိမ် ကနေ အစ်ကိုလတ်ဆီပြေးတာ။ အစ်ကိုကြီး ကပြန်လာခေါ်တာ။ ဟီးး။ မေမေ က အေးဆေး။